आखिर मलामी गएर फर्केपछी वा शवसँगै यात्रा गरेपछि किन नुवाउछ मनिस ? एस्तो छ रहस्य अबश्य पढ्नुहोस – Laliguras Online
आखिर मलामी गएर फर्केपछी वा शवसँगै यात्रा गरेपछि किन नुवाउछ मनिस ? एस्तो छ रहस्य अबश्य पढ्नुहोस
March 23, 2019 May 10, 2020 admin	0 Comments
काठमाडौँ । तपाईहरुले याद गर्नुभएको होला । मलामी गएपछि अनिवार्य नवाएर मात्र अरु कार्य गर्ने चलन गाँउ घरमा कायमै छ ।शास्त्रमापनि मलामी गएपछि वा शवसँगै यात्रा गरेपछि स्नान गरेर मात्र गृह प्रवेश गर्नु भनिएको छ । चाणक्यलेपनि भनेका छन् की केही यस्ता अवस्थाहरु छन् त्यसपछि नुहाउनु जरुरी हुन्छ । उनका अनुसार स्त्री होस् या पुरुष स्वास्थ्यका लागि त नुहाउनै पर्छ । चाणक्य नीतिका अनुसार यी चार काम सकेपछि नुहाउनुपर्छ ।तेल मालिश गरेपछि नुहाउनुपर्छ चाणक्यले बताएअनुसार स्वस्थ शरीर र चमकदार छालाका लागि हप्तामा कम्तीमा एकपटक पुरा शरीरमा तेल मालिश जरुरी छ ।तेल मालिशपछि शरीरमा भएका रोम छिद्रहरु खुल्छन् र भित्रका विकार पदार्थहरु बाहिर निस्कन्छन् । यसकारण तेल मालिश गरेको केही समयपछि नै नुहाउनुपर्छ । तेल मालिशपश्चात ननुहाई बाहिर जानु अशुभ मानिन्छ ।
यौनसम्पर्क गरेपछि नुहाउनुपर्छ स्त्री होस् या पुरुष यौनसम्पर्क गरेपछि नुहाउनु जरुरी मानिन्छ । किनकी उक्त समयमा महिला तथा पुरुष दुवै अपवित्र हुन्छन् । चाणक्य नीतिका अनुसार यदि कोहि यौनसम्पर्कपछि पनि नुहाउँदैन भने ऊ कुनैपनि धार्मिक कामका लागि योग्य हुन सक्दैन ।कपाल काटेपछि नुहाउनुपर्छ चाणक्य नीतिका अनुसार कपाल काटेपछि नुहाउनुपर्छ । कपाल काटेपछि पुरै शरीरभरि कपालका स(साना टुक्राहरु झरेका हुन्छन् ।त्यसकारण कपाल काटेपछि नुहाउनु जरुरी मानिन्छ । शास्त्रमा विश्वास छ । यो कुरा सही लागेको महसुस भए सेयर गर्न सक्नुहुनेछ ।
← दुखद खबर दाङमा मोटरसाइकल दुर्घटना १ जनाको घटना स्थलमै मृत्यु ,,,(RiP लेख्नुहोस् मृत्य आत्यमाले शान्ति पाउनेछ)
भूकम्पको धक्का केन्द्रविन्दु बेशीशहर,,,,,(सक्दो शेयर गरौ) →